प्रत्येक तेस्रो जर्मन लगानीको रूपमा cryptocurrencies ठान्नुहुन्छ - Blockchain समाचार
प्रत्येक तेस्रो जर्मन लगानीको रूपमा cryptocurrencies ठान्नुहुन्छ
हुनत Bitcoin, Ethereum र सह. हालै मूल्य गिरावट द्वारा कडा हिट थिए, आफ्नो लोकप्रियता तिनीहरूलाई हानि सानो गरेको छ. को कुल 29 जर्मन नागरिक प्रतिशत एक रोचक लगानी रूपमा डिजिटल मुद्रा हेर्न. को को प्रसङ्ग मा प्रतिनिधि सर्वेक्षण Postbank डिजिटल अध्ययन 2018 फेब्रुअरी को अन्त र मार्च को अन्त को बीच भयो, अर्थात् तुरुन्तै कहिलेकाहीं धेरै तेज मूल्य डिजिटल मुद्राहरुमा पतन पछि. खासमा, नियामक वित्तीय प्रणाली को स्वतन्त्रता र उच्च लाभ को आशा जर्मन मा एक ठूलो आकर्षण पार्छन्. जवान र डिजिटल affine जर्मन को ब्याज विशेष गरी उच्चारण छ. बीच उमेर समूहमा 18 र 34, लगभग एक दुई (46 प्रतिशत) लगानीको रूपमा cryptocurrencies मा रुचि छ – अक्सर नकारात्मक रिपोर्ट बावजुद.
मिडिया उपस्थिति Bitcoin र सह चासो बढ्छ
गत वर्ष, cryptocurrency दर अर्को एक रेकर्ड उच्च बाट कूद, तर अन्तमा देखि 2017, Bitcoin को मूल्य, को प्रयोग सबैभन्दा व्यापक cryptocurrency, भन्दा बढी खसेको छ 65 प्रतिशत. मिडिया मूल्य उतार चढाव मा विस्तार रिपोर्ट र धेरै उद्योग प्रतिनिधिको चेतावनी बोल्न; को Deutsche Bundesbank वा जर्मन वित्तीय Supervisory प्राधिकरण Bafin जस्ता. विशेषज्ञहरु को आवाज, जो cryptocurrencies द्वारा लगानीको व्यापार मा एक क्रान्तिको भविष्यवाणी थियो, पनि धेरै शान्त भयो.
“यो जर्मन अझै पनि उच्च घाटा र स्पष्ट जोखिम भएपनि एक वित्तीय लगानी रूपमा cryptocurrencies रुचि हो कि विचारणीय छ,” भन्छन् डा. थोमस अभाव, Postbank प्रमुख डिजिटल अधिकारी. “तिनीहरूले एक प्रचार पालना बस किनभने मान्छे पैसा गुमाउनु हुनेछ कि एक वास्तविक जोखिम पक्कै छ।” Bitcoin पहिलो cryptocurrency थियो 2009, र अब त्यहाँ बढी छन् 1,500. Decentralized डाटा व्यवस्थापन र cryptographically सुरक्षित प्रोटोकल त्यस्तो बैंकहरू रूपमा केन्द्रीय अधिकारीहरूले बिना डिजिटल भुक्तानी लेनदेन सिर्जना.
महिला सिस्टम स्वतन्त्रता द्वारा मोहित छन्, फिर्ती अवसर द्वारा मानिसहरू
यो विशेष गरी cryptocurrencies बारेमा जर्मन fascinates कि स्थापित वित्तीय प्रणाली को स्वतन्त्रता छ. यस पक्षलाई महिलाहरु को लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ (60 प्रतिशत) मानिसहरू लागि भन्दा (51 प्रतिशत). मानिन्छ उच्च लाभ को संभावना, अर्कोतर्फ, विशेष गरी मानिसहरू रिस उठाउँछ (56 तुलना प्रतिशत 36 महिला प्रतिशत). cryptocurrencies को प्रत्येक तेस्रो प्रशंसक लागि, गुमनाम पनि महत्त्वपूर्ण छ. विपरीत, उदाहरणका लागि, कर्पोरेट साझेदारी, व्यक्तिगत निवेशक चासो छैन. cryptocurrencies एक सम्पत्ति संग बैंक कुनै कर्मचारी वा दलाल को डिपो अंतर्दृष्टि छ. हरेक पाँचौं रुचि व्यक्ति लागि, यस्तो थ्रिल्स र रूपमा भावनात्मक कारण पनि छन् “सुन उत्खनन गर्ने यंत्र भावना” डिजिटल लगानी एक अपेक्षाकृत नयाँ फारम लगानी को.
विशेष गरी ठूलो जवान मान्छे संग आकर्षण
लगानी गर्न कदम जवान मानिसहरूले विशेष गरी बनेको छ. छ प्रतिशत, डिजिटल निवासी औसत जनसंख्या रूपमा दुई पटक धेरै cryptocurrencies छ. अर्को बाह्र महिना मा, अर्को 14 को प्रतिशत 18- 34 वर्ष को बच्चाहरु गर्न अझै पनि cryptocurrencies बढ्न चाहनुहुन्छ. सबै उमेर समूह मार्फत, यो मात्र आठ प्रतिशत छ. “सबै आकर्षण बावजुद, जवान लगानीकर्ताले यो स्थापित बैंकिङ प्रणालीबाट प्रस्ताव को दृष्टि गुमाउन हुँदैन. लगानीको रूपमा जमानत पहिले नै लगानीको बनाउँछ जो कोहीले पक्कै किनभने संलग्न उच्च जोखिम cryptocurrencies लगानी हुँदैन. किनभने लगानीको यस प्रकारको अत्यधिक speculative छ, “जारी थोमस Mangel.
अवसर र जोखिम बारे ज्ञान शायद overestimated छ
उच्च मूल्य साथै cryptocurrencies योजना आफ्नै cryptocurrencies स्थापित गर्न संगठनहरूसित वा देशहरूमा बैंकिंग द्वारा उतार चढाव व्यापक मिडिया कभरेज गर्न नेतृत्व गरेका. अध्ययन को परिणाम यो मिडिया उपस्थिति तिनीहरूले cryptocurrencies परिचित छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न धेरै जर्मन जान्छ संकेत – तिनीहरूले पहिले नै पढ्न वा तिनीहरूलाई बारेमा धेरै सुनेको छु किनभने. 20 जर्मन को प्रतिशत आफूलाई cryptocurrencies को राम्रो वा धेरै राम्रो ज्ञान प्रमाणित. डिजिटल निवासी जमीनमा पनि सुरक्षित महसुस: 29 को प्रतिशत 18- गर्न 34 वर्ष को बच्चाहरु आफूलाई विचार “गुप्त connoisseurs”.
“कारण मिडिया hypes गर्न, धेरै मानिसहरू लगानीको रूपमा अवसर र cryptocurrencies जोखिम आफ्नो ज्ञान overestimate,” यस्तो चेतावनी दिन्छ थोमस Mangel. उदाहरणका लागि, धेरै cryptocurrencies देखि लाभ यदि तिनीहरूले कम्तिमा एक वर्षको लागि राखिएको छैन पूर्णतया taxed गर्न आवश्यक छ कि थाहा छैन. सबैभन्दा माथि, कुल हानि को जोखिम, जो यस फारममा अन्य निवेश लागि अवस्थित छैन, पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन. cryptocurrencies लगानी गर्न चाहनुहुन्छ जो कोहीले, तथापि, तिनीहरूले बिना गर्न सक्छन् भन्ने मात्र योगफल चयन गर्न सल्लाह दिइन्छ.
को Postbank डिजिटल अध्ययन पृष्ठभूमि जानकारी 2018 – डिजिटल जर्मन र मुद्रा
फेब्रुअरी यो वर्ष को मार्च गर्न अवधिमा, 3,100 जर्मन को Postbank डिजिटल अध्ययनको लागि अन्तरवार्ता थिए 2018 – डिजिटल जर्मन र मुद्रा. एक पंक्ति मा चौथो पटक, Postbank गरेको अध्ययन विशेष सामान्य र वित्तीय विषयहरुमा स्याचुरेसन को सम्बन्ध मा जर्मन जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा उदीयमान छन् भनेर विकासक्रम जाँच्ने. जनसंख्या-प्रतिनिधि संरचना चित्रण गर्न, नमूना राज्य द्वारा भारित थियो (proportionalization), उमेर र लिङ्ग. सन्दर्भ फाइल जनगणना आधारित थियो 2011 संघीय सांख्यिकीय कार्यालय को. परिणाम सम्पूर्ण संख्या बदलिएका छन्. को कुल मा विचलन गोलाई मतभेद द्वारा बताए गर्न सकिन्छ.
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 10.06.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 11.06.2018
Kylie Terrezza भन्छन्:
जुन 19, 2018 मा 5:09 PM
जुलाई 21, 2018 मा 7:31 PM
अचम्मको! Its actually awesome article, I have got much clear idea on the topic of from this post.
सेप्टेम्बर 5, 2018 मा 2:31 PM
You are incredible! धन्यवाद!
सेप्टेम्बर 7, 2018 मा 5:20 AM
सेप्टेम्बर 9, 2018 मा 9:03 AM